UNWTO General Assembly arịọrọ mgbaghara: WTO ebigharịrị ruo mgbe ebighị ebi!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » UNWTO General Assembly arịọrọ mgbaghara: WTO ebigharịrị ruo mgbe ebighị ebi!
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • WTN
General Council nke Òtù ahia ahia ụwa (WTO) kwetara na mbubreyo Fraịde (26 Nọvemba) ka yigharịrị Mgbakọ Minista mgbe ntiwapụ nke ụdị nje virus Omicron Covid Variant B.1.1.529 mere ka ọtụtụ gọọmentị weta mmachi njem nke gaara egbochiri ọtụtụ ndị ozi irute Geneva.
Enweghị nzaghachi mgbe eTurboNews kpọtụrụ ndị Tourtù Njem Nleta Worldwa (UNWTO)) na ma ọ bụrụ na Mgbakọ Mgbakọ na-abịa na Madrid ahazi maka otu oge dịka WTO General Council ga-eyigharịkwa.
Onye bụbu odeakwụkwọ ukwu UNWTO Francesco Frangialli mere nkwupụta Fraịde na-ekwu:
"N'iburu n'uche ihe iyi egwu ahụike ọhụrụ na n'echiche m, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na UNWTO na Spain ịjụ maka ahụike doro anya na ike siri ike maka ndị nnọchiteanya na ndị ozi na-aga Madrid n'ime ụbọchị ole na ole.
A na-atụ anya na ndị ga-esi n'ọtụtụ akụkụ ụwa bịa. Na mgbakwunye, ịkpa ókè nke ga-eme ka ndị nnọchi anya bi na mba ndị nwere mmachi njem, kpọmkwem site na ọtụtụ mba Africa agaghị anabata maka Òtù ebe a ga-emeso ndị sonyere n'ụkwụ nha anya.
The Network Njem Nleta Ụwa ngwa ngwa toro okwu a n'ezi oge site n'ọnụ onye ode akwụkwọ nsọpụrụ - General, kpọmkwem n'ihi mkpa nke UNWTO General Assembly maka ọtụtụ ndị sonyere na Africa debanyere aha.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa ugbu a ịga emume na Rwanda na-ekwenye na WTN na onye bụbu odeakwụkwọ ukwu.
na Òtù ahia ahia ụwa, Nzukọ Minista nke iri na abụọ (MC12) ga-amalite na 12 Nọvemba wee gbaa ọsọ ruo 30 Disemba, mana ọkwa nke mmachi njem na iche iche chọrọ na Switzerland na ọtụtụ mba Europe ndị ọzọ dugara General Council Chair Amb. Dacio Castillo (Honduras) na-akpọ nzukọ mberede nke ndị òtù WTO niile iji gwa ha ọnọdụ ahụ.
"N'iburu n'uche mmepe ndị a na-adịghị mma na ejighị n'aka na ha na-akpata, anyị ahụghị ihe ọzọ ma ọ bụghị ịtụ aro ka a yigharị Nzukọ Ndị Minista na ịkpọghachi ya ozugbo enwere ike mgbe ọnọdụ kwere," Amb. Castillo gwara General Council. Enwere m ntụkwasị obi na ị ga-aghọta nke ọma ịdị njọ nke ọnọdụ ahụ.
Onye isi oche Ngozi Okonjo-Iweala kwuru na mgbochi njem ahụ pụtara na ọtụtụ ndị minista na ndị nnọchiteanya ukwu enweghị ike itinye aka na mkparịta ụka ihu na ihu na Nzukọ ahụ. Nke a ga-eme ka ikere òkè n'otu n'otu agaghị ekwe omume, o kwuru.
Ọ rụtụrụ aka na ọtụtụ ndị nnọchi anya ogologo oge na-ekwusi ike na nzukọ anaghị enye ụdị mkparịta ụka dị mkpa maka ịme mkparịta ụka siri ike n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
"Nke a abụghị ndụmọdụ dị mfe ịme…Ma dị ka onye isi nchịkwa, ihe kacha mkpa m bụ ahụike na nchekwa nke ndị niile sonyere na MC12 - ndị ozi, ndị nnọchiteanya, na ọha mmadụ. Ọ ka mma imehie n'akụkụ ịkpachara anya, "ka o kwuru, na-ekwupụta na nbigharị ahụ ga-aga n'ihu na-eme ka WTO kwekọọ n'ụkpụrụ Switzerland.
Ndị òtù WTO kwekọrịtara n'otu n'otu na nkwado ha tụrụ aro sitere n'aka onye isi oche na onye isi oche ndị isi, ma kwere nkwa na ha ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ iji belata esemokwu ha na isi isiokwu.
Enwere ike ịtụ anya na World Tourism Organisation n'okpuru nduzi nke UNWTO Secretary General Zurab Pololikashvili nwere otu nchegbu ahụ maka ndị ozi njem nleta, ma ghọta mkpa ọ dị inye ndị nnọchiteanya si South Africa, Eswatini, Botswana, Zimbabwe, Zambia, na ndị ọzọ. Mba Africa, Belgium na Hong Kong otu nlebara anya nke Òtù Azụmahịa Ụwa na-eme.
Taa Gọvanọ New York na United States kwupụtara ọnọdụ mberede maka Steeti ya, n'agbanyeghị na achọpụtabeghị ụdị nje ọhụrụ a.
Achọpụtala ikpe na South Africa, Botswana, Belgium na Hong Kong ma na-atụ anya ịgbasa.
Maka Geneva, ọ bụ ihe na-adịghị mma maka Òtù Azụmahịa Ụwa.
A tụrụ anya ogbako a afọ anọ. Ma enwere mkpebi ndị bụ isi a ga-eme na azụmaahịa ụwa dị ka mkpebi nke ime na ụlọ ọrụ ahụ.
Eziokwu siri ike maka UNWTO ime mkpebi a:
Enweghị ndokwa na ụkpụrụ UNWTO na-ahụ maka ụdị ọnọdụ mberede ahụ. Naanị ntụaka nwere ike ịbụ edemede 20 nke ụkpụrụ nke na-enye ndị isi oche ikike ime mkpebi niile dị mkpa n'etiti nnọkọ abụọ nke Mgbakọ.
Ọ bụrụ na Kansụl chọrọ ibute ụzọ, ọ ga-abụ nke ọma ọrụ ya. Isi ihe bụ na ọ nweghị ndị nnọchiteanya nọ na Madrid karịsịa ndị na-ahụ maka UNWTO, dị ka ọ dị n'ihe gbasara nnukwu òtù zuru ụwa ọnụ.
Ọtụtụ ga-adabere na àgwà na mkpebi nke Gọọmenti Spanish ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị ahụike nke ndị nnọchiteanya na ahụike nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ, ma nchekwa nke ndị bi na Madrid.